Kedu ndị na-agba ịnyịnya anọ nke apocalypse ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Gịnị bụ ndị ịnyịnya anọ nke apocalypse. Ndị na-agba ịnyịnya anọ nke Apọkalips bụ akụkụ nke amụma oge ọgwụgwụ. nọchitere anya E buru amụma ihe ndị ga-eme tupu ọgwụgwụ nke ụwa. E nwere ọtụtụ nkọwa dị iche iche nke mmezu nke amụma nke ndị na-agba ịnyịnya anọ nke Apọkalips.
N’ọhụụ Jọn, nke a kọwara na Mkpughe 6, Nwa Atụrụ ahụ (Jizọs) nwere akwụkwọ pụrụ iche n’aka ya. ejiri akara asaa mechie ya. Mgbe ị meghere akara ọ bụla, ihe na-eme n'ala. Akara anọ nke mbụ zipụrụ ndị ịnyịnya anọ ahụ n'ụwa.
1 Ihe ngosi na Apọkalips
2 Gịnị bụ ndị ịnyịnya anọ nke apocalypse otu otu
2.1 Nwa amadi mbụ
2.2 Onye agha nke abụọ
2.3 Onye agha nke atọ
2.4 Nwa amadi nke anọ
3 Olee mgbe ndị ịnyịnya anọ nke apocalypse ga-apụta?
4 Kedu ihe ị ga-amụta n'ihe oyiyi apocalyptic ndị a?
Ihe ngosi na Apọkalips
Ọtụtụ n'ime asụsụ e ji mee ihe n’akwụkwọ Mkpughe bụ atụ. Ọhụụ amụma ahụ Jọn onyeozi kọwara bụ akara site na onyonyo na onu ogugu siri ike ikwuputa. Ọ bụ ya mere e ji jiri nọmba, agba, anụ ọhịa, anụmanụ, kpakpando, oriọna, nkume dị oké ọnụ ahịa, na ihe ndị ọzọ na-anọchi anya ndị mmadụ, ihe omume, ma ọ bụ eziokwu ndị ga-apụta n’ikpeazụ.
Ntụaka ndị a niile ekwesịrị ịgụ ya dabere n'ihe odide Akwụkwọ Nsọ ndị ọzọ, bụ́ nke n’ọnọdụ ụfọdụ na-enye nkọwa doro anya banyere ha. Dịka ọmụmaatụ: ihe anọ ahụ dị ndụ Mkpughe 4: 6-8 pụtakwara na Ezikiel 1: 5-14 . Ebe i nwere ike ịgụ amaokwu abụọ:
«Ma n'ihu ocheeze ahụ dị ka oké osimiri nke iko dị ka crystal; na n'akuku oche-eze ahu, na gburugburu oche-eze ahu, ihe anọ di ndu juputara n'anya n'iru na n'azu. mbụ ndu di ka ọdum; nke abụọ yiri nwa ehi; nke-atọ nwere iru dika nwoke; nke anọ dị ka ugo na-efe efe. Ma ihe anọ ahu nke di ndu nwere nkù isi, otù nime ha, buruburu n'elu na ime ha juputara n'anya anya; ma ha akwụsịghị ehihie na abalị ịsị: Nsọ, nsọ, nsọ ka Onye-nwe Chineke nke Pụrụ Ime Ihe nile dị, onye dị adị, onye dị adị, na onye gaje ịbịa.«. Mkpughe 4:6-8
«na n'etiti ya ihe oyiyi nke ihe anọ dị ndụ. Ma nka bu iru-ha: ha nwere oyiyi madu.
Nke ọ bụla nwere ihu anọ na nku anọ.
Ma ukwu-ha guzoro ọtọ, ọbu-ukwu-ha di kwa ka ọbu-ukwu nwa-ehi; + ha wee na-egbu maramara dị ka ọla a kpara akpa nke ukwuu.
N'okpuru nkù-ha, n'akuku anọ ha ka ha nwere aka madu; na iru-ha na nkù-ha n'akuku anọ.
Ha ji nkù ha jikọta onwe ha. Ha atụgharịghị mgbe ha na-aga, ma onye ọ bụla na-aga n'ihu.
Ma iru ha di, bú iru madu, na iru ọdum n'akuku aka-nri nke ha anọ, na iru oke-ehi di n'aka-ekpe ha anọ; N'otu aka ahụ, ihu ugo dị n'akụkụ ya anọ.
Otú ahụ ka ihu ha dịkwa. Ha b͕asa-kwa-ra nkù-ha n'elu, nkù-ha abua, nke ejikọtaworo; ndị nke ọzọ kpuchiri ahụ ha. Ma onye ọ bula nējeghari n'iru; ebe Mọ Nsọ kpaliri ha ije, ha jere ije; ma mb͕e ha nēje ije, ha adighi-atụgharị.
Ma oyiyi nke ihe dị ndụ, ọdịdị ha dị ka icheku ọkụ na-ere ọkụ, dị ka ọhụhụ nke mkpọmkpọ ọkụ na-ejegharị n'etiti ihe ndị dị ndụ; ọku ahu we nēre ọku, àmùmà we si n'ọku ahu puta.
Ndi di ndu we b͕a ọsọ laghachi dika àmùmà«. Ezikiel 1:5-14
Gịnị bụ ndị ịnyịnya anọ nke apocalypse otu otu
Nwa amadi mbụ
Onye na-agba nke mbụ na-egosi n'agbanyeghi na a White ịnyịnya, na-eji ụta na okpueze n'isi; dị njikere imeri. Okpueze bụ akara nke Victoria Na ike; ụta bụ ngwa agha ogologo oge, nke nwere ike ịpụta na mmetụta nke knight ga-enwe ogologo ogologo.
Ahụrụ m mgbe Nwa-atụrụ ahụ meghere otu n’ime akàrà ahụ, ma anụrụ m otu n’ime ihe anọ ahụ dị ndụ ka o ji olu égbè eluigwe sị: Bịa hụ. M'we hu, ma, le, inyinya ọcha; onye na-agba ya nwere ụta; ewe nye ya okpu-eze, o we pua na-emeri, na imeri. Ediyarade 6: 1-2
Ụfọdụ ndị na-atụ aro na onye mbụ na-agba ya bụ Jesus, n’ihi na ọ bụ onye mmeri wee bịa n’elu ịnyịnya ọcha bịa, dị ka e si ጠበቀ d bịa banyere na ọ bụ onye mmeri. Ndị ọzọ na-eche na ọ bụ ya Na-emegide Kraịst, onye ga-ebuli onwe ya elu dị ka chi ma nwee ike dị ukwuu n'ebe ahụ ụwa.
M'we hu elu-igwe ghere oghe; ma lee, ịnyịnya ọcha, ma onye nọ n’elu ya ka a kpọrọ onye kwesịrị ntụkwasị obi na onye ezi-okwu; Ediyarade 19: 11
Onye agha nke abụọ
Mgbe nke abụọ akara e meghere, a knight na oké mma agha pụtara ịnya a ịnyịnya uhie. Nwere ike wepụ udo ma mee ka ndị mmadụ na-egbu ibe ha. Mma agha na agba uhie na-anọchi anya ya ọnwụ ọbara na-alụ ọgụ.
Nke abụọ knight yiri ka a nnọchiteanya nke agha . Jizọs dọrọ aka ná ntị na n’ikpeazụ mgbe a ga-enwe agha na asịrị agha.
Unu gānu kwa agha na akukọ agha; Hụ na obi adịghị gị mma, n'ihi na ọ dị mkpa ka ihe a niile mee; ma ọgwụgwụ ihe erubeghị. Matiu 24:6
Onye agha nke atọ
Onye na-agba nke atọ na-agba a ojii ojii ma nwee ihe ọ̀tụ̀tụ̀ n’aka. Mgbe ọ pụtara, olu na-ekwu ọnụ ahịa nri n'oge ahụ. Ọnụ ahịa nri dị oke ọnụ, nke pụtara na nri ga-adị oke ọnụ. Ọnụ ọgụgụ ahụ na-anọchi anya ịzụrụ na ire: mgbanwe azụmahịa.
A na-atụgharịkarị knight nke atọ dị ka agụụ. Ebe ọnụ ahịa dị oke ọnụ, ọ ga-esiri ndị nkịtị ike inye ezinụlọ ha nri. Ọ nwekwara ike na-anọchi anya nsogbu akụ na ụba.
«Mgbe ọ meghere nke atọ akara, m nụrụ nke atọ dị ndụ na-asị: Bịa na-ahụ. M'we hu, ma, le, inyinya oji; ma onye nānọkwasi ya nwere ihe-ọtùtù n'aka-ya. M'we nu olu sitere n'etiti ihe anọ ahu di ndu, si, pound abua nke ọka wheat n'otù denarius, na pound barley isi otù denarius; ma emerụla mmanụ ma ọ bụ mmanya. Mkpughe 6:5-6
Nwa amadi nke anọ
Ịnyịnya nke anọ bụ odo. A na-akpọ onye ọchịagha ya Ọnwụ na Hedis (hell) na-esochi ya anya. A na-ejikọkarị ịcha edo edo na ọnwụ n'ihi na ọ dị ka agba ozu.
«Mgbe ọ meghere nke anọ akara, m nụrụ olu nke anọ dị ndụ, na-asị: Bịa na-ahụ. M'we hu, ma, le, inyinya edo edo, ma onye nānọkwasi ya ka anākpọ ọnwu, Hedis nēso kwa ya; + ewe nye ya ike ịchị otu ụzọ n’ụzọ anọ nke ụwa, ka o were mma agha + jiri ụnwụ + na igbu mmadụ + na anụ ọhịa + gbuo. Ediyarade 6: 7-8
Ọ bụ naanị onye na-agba ịnyịnya nke anọ ka Baịbụl kwuru kpọmkwem ihe ọ bụ: ọnwụ. The ikpeazụ knight (ma ọ bụ anọ knights ọnụ, dabere na otú anyị si akọwa ederede) nwere ike igbu otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ụwa .
Olee mgbe ndị ịnyịnya anọ nke apocalypse ga-apụta?
Anyị amaghị mgbe ndị knight anọ ga-apụta. Ụfọdụ na-eche na ha apụtalarị ma ọ bụ na-apụta n'akụkọ ihe mere eme ruo mgbe ọgwụgwụ; ndị ọzọ na-eche na ha ga-anọgide na-egosipụta, naanị na njedebe. Ma Nke a bụ eziokwu naanị Chineke maara.
N'echiche a, anyị ga-enwerịrị ịdị umeala n'obi ịnakwere nke ahụ enwere nkọwa dị mgbagwoju anya na ụfọdụ ihe omimi gbasara njedebe oge. Ọ bụghị maka anyị ịgbalị ịchọpụta eziokwu ma ọ bụ ime nkwekọrịta ikpeazụ na nke mechiri emechi. N'agbanyeghị nke ahụ, e nwere ọtụtụ ntule, ebe ọ bụ na e nwere ụfọdụ ọnụ ọgụgụ apocalyptic nke a pụrụ ịkọwa n'ụzọ dị iche iche.
Mana n'ozuzu, a ghaghị iburu n'uche ụdị apocalyptic nke akwụkwọ ahụ, na, ya mere, a ga-aghọtarịrị akara ya site n'ụdị edemede a. Banyere ihe a na-akọwaghị nke ọma site n'okwu Akwụkwọ Nsọ, anyị ga-akpachapụ anya na nghọta mgbe anyị na-agbalị ịkọwa ya.
Ihe kacha mkpa ịmara bụ na ndị ịnyịnya anọ nke Apọkalips na-abịa weta ikpe n'iru uwa n'ihi nmehie. Otu ụbọchị anyị niile ga-eche ihu ikpe ahụ nke Chineke. Ya mere, anyị chọrọ nzọpụta dị na Jizọs Kraịst.
Kedu ihe ị ga-amụta n'ihe oyiyi apocalyptic ndị a?
Ihe atụ nke ndị na-agba ịnyịnya anọ ahụ
Ọ bụ ezie na nke a bụ isiokwu dị mgbagwoju anya, nkuzi Akwụkwọ Nsọ na njedebe ga-abụrịrị na-agba Ndị Kraịst ume n’ije nke okwukwe, ịhụnanya, na nrubeisi nye Chineke ruo ọgwụgwụ. Ha na-ejekwa ozi dị ka a ịdọ ndị na-ekweghị ekwe aka ná ntị banyere otu a ga-esi kpee ha ikpe na taa ha ahụhụ na njedebe nke oge. Onye-nwe-anyị Jisus Kraịst ga-abịakwa n’ebe a ọzọ, jiri ike na ebube, ịchọ ndị Ya ọ hụrụ n’anya na ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe.
N'ime ọnụ ọgụgụ ndị a kapịrị ọnụ sitere na Mkpughe 6:
na ndi nwe anyi gosi anyị nke ahụ Chineke ga-ekpe ụwa a rụrụ arụ ikpe we kewapu kwa na amara nke Jisus.
na inyinya bụ akara na-ekpughe na ike na ike nke chi. N'oge ọ ga-ekpebi, a ga-etinye ikpe ndị ahụ ngwa ngwa, dị ike, na n'ezie. N'agha ikpeazụ a, nke e mechaworo n'obe. ekwensu na ndị na-eso ụzọ ya ka a ga-ata ahụhụ maka mmehie ha. A ga-enwe oké mkpagbu ná mmezu nke amụma ndị a.
na stampụ ha na -ekwu maka eziokwu nke ọdịnaya nke ekpughere n’ime Okwu Chineke. Ikpe Chineke dị mma ma kwesịkwa ịnara ya niile.
Kraist Nwa-aturu Chineke, que quita mmehie ahụ del mundo, es digno de toda confianza. Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra y es quien abre los sellos. Ejercerá juicio y justicia al llevar a cabo todos los decretos de Dios.
N'iburu nke ahụ n'uche, anyị aghaghị ịnakwere nzọpụta na mgbaghara Chineke n'oge Jizọs Kraịst. Ọ bụrụ na i nwebeghịrịị, chọọ ịmata atụmatụ Chineke maka nzọpụta site na Akwụkwọ Nsọ. Tukwasi obi na Kraịst ma jikere maka ọgwụgwụ.
Site Discover.online, anyị na-atụ anya isiokwu a banyere gịnị bụ ndị ịnyịnya anọ nke apocalypse edoziwo obi abụọ gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịga n'ihu na-amụ gbasara echiche Ndị Kraịst, gaa n'ihu na-eme nchọgharị na webụsaịtị anyị. Ruo oge ọzọ!.
Gịnị bụ ebo iri na abụọ nke Izrel